बदाम संग कुखुरा | बेजिया
बदाम संग कुखुरा
मारिया vazquez | 18/07/2021 10:00 | CARNES
यदि तपाईंले चिनियाँ रेस्टुरेन्टमा खाइसक्नु भएको छ भने तपाईंले सायद प्रयास गर्नुभएको छ बदाम संग कुखुरा हामी आश्वासन दिदैनौं कि यो उस्तै उस्तै हो तर यसले हामीलाई एक साधारण र मा रमाईलो गर्न दिन्छ सामान्य भन्दा फरक यस घटकको।
बदाम संग यो कुखुरा तयार गर्न को लागी सरल छ। तपाईंसँग हो, हो, पहिले नै सम्झन कुखुराको छाला ताकि यसले सोया सॉस र अदुवाको सबै स्वाद लिन्छ। एक घण्टा पर्याप्त छ, तर तपाईं घडी हेर्न सक्षम हुनु आवश्यक छैन। यदि त्यहाँ दुई छन् भने, केहि पनि हुनेछैन।
यस थालमा बदामको अतिरिक्त हामीले प्याज र गाजरलाई सम्मिलित गरेका छौं। तपाईं अधिक वा कम पातलोको टुक्रा काट्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई खान चाहनुहुन्छ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई धेरै नरम मन पराउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई पातलो काट्नुहोस्; यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, मोटा काट्नुहोस्। के तपाई यसलाई चलाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
१ कुखुराको स्तन, पासेदार
M० मिलि सोया सॉसे
खैरो चिनीको १/२ चम्मच
२० खुल्ला बदाम
१ मध्यम प्याज, काटियो
Car गाजर, खुली र काटियो
२ m० मिलि चिकन ब्रोथ
कर्नस्टार्चको 1-2 चम्मच
कुखुराको घाउमा, सोया सॉस, भुई अदुवा र खैरो चिनी राख्नुहोस्। राम्रोसँग मिक्स र यसलाई कम्तिमा एक घण्टा फ्रिजमा आराम गर्न दिनुहोस् ताकि कुखुराले स्वाद लिन्छ।
जब लगभग समय बितिसकेको छ, एक फ्राइंग प्यान मा तेल गरम र बादाम sauté मध्यम-उच्च तातो भन्दा बढी सुनको खैरो छ। फिर्ता र आरक्षण गर्नुहोस्।
उही प्यानमा अब प्याज र गाजर sauté २० मिनेटको बखत।
यसैबीच, एक कपमा कुखुराको ब्रोथ र अलग गर्नुहोस् यसमा कर्नस्टार्क विघटन गर्नुहोस्.
पाँच मिनेट पछि प्यानमा फिर्ता बादाम र Marinade संग कुखुरा सम्मिलित गर्नुहोस् र कुखुराको ब्रोथ, जसमा तपाईंले कॉर्नस्टार्चलाई विघटन गर्नुभयो।
मिक्स र १ 15 मिनेट को लागी पूरै खाना बनाउनुहोस् मध्यम-कम तातोमा त कुखुराले पकाउँदछ र सास गाढा हुन्छ। बेजियामा हामीले यसलाई पकाउछौं आधा समय यसलाई उजागर गर्नु अघि।
सॉस पर्याप्त गाढा छैन? दिमागमा राख्नुहोस् कि टेम्परिंगले तपाईंलाई मोटो बनाउँछ। यदि यो अझै तपाईंलाई पातलो देखिन्छ भने, थप कर्नस्टार्च थप्नुहोस्। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं धेरै मोटो भएको छ, पानी वा शोरबा थप्नुहोस्।
बदाम तातो संग कुखुराको सेवा गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » CARNES » बदाम संग कुखुरा
अविश्वासी मानिसहरू: यसले हाम्रो जीवनमा कसरी असर गर्छ?
कसरी चरणमा "घुमाउरो कपाल" विधि अनुसरण गर्ने